टीकटकमा भिडेका पुण्य गौतमः दुई दिन लाइभ बस्दा दुई लाख कमाए ! (कुराकानीसहित) – Nepal Press
२०७८ असोज ११ गते १८:३१
– युट्यूवमा छाइरहनुभएकै थियो, एक्कासी कसरी टीकटक लाइभको भुत चढ्यो तपाईंलाई ?
लाइभमा आउनेहरूले धमाधम उपहारहरू फ्याँक्नुहुने रहेछ । मलाई त यस्तो हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन । गजबै लाग्यो । अनि त म ९ बजेदेखि लाइभ बसेको मान्छे बिहान साढे पाँच बजे मात्रै उठेँ । त्यतिञ्जेलमा मरोमा ३ लाखजति लाइक आएछ । एकचोटिमा १२ हजारसम्म जोडिन आउनुभयो । तपाईंले हेर्नुभएको होला त्यो बेला निद्राले आँखा पनि राताराता भएका थिए ।
– तपाईंप्रति टीकटकमा मान्छेहरूको यतिविधि आकर्षण चाहिँ किन होला त ?
– लाइभ बसेर दिनमै लाखौं कमाइरहनु भएको चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?
– तपाईंहरूले लाइभ बसेर कमाउने पैसा त आखिर नेपालीहरुकै हो नि होइन ?
– तर अरु देशका मान्छेहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न त भाषाको समस्या आउँदैन ?
– यसरी दिनरात लाइभमा बस्दा तपाईंले बोल्ने विषय चाहिँ के हुन्छ ?
– भनेपछि अब तपाईं युट्यूवरलाई अन्तर्वार्ता दिन छोडेर रातदिन टीकटकमै रमाउने हुनुभयो ?
– अब टीकटकबाट कमाएको पैसाले के गर्ने त ?
प्रकाशित: २०७८ असोज ११ गते १८:३१
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारबारे सरकारले थाल्यो छलफल